घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू Conor Coady बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो Conor Coady को जीवनीले तपाईंलाई उसको बचपन कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, पत्नी, बच्चाहरू, नेट वर्थ, जीवनशैली र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा तथ्यहरू बताउँछ।
सरल शब्दहरूमा, हामी तपाइँलाई डिफेन्डरको पूर्ण जीवन कहानी प्रस्तुत गर्दछौं। यो सम्झना उनको शुरुआती दिनदेखि सुरु भयो जब उनी प्रसिद्ध भए। तपाईंको भोक जगाउन, यहाँ फोटोहरू छन् जुन उनले वर्षौंको दौडानको प्रगति देखाउँदै रहेछ- कोनोर कोएडीको बायोको स्पष्ट सार।
हो, सबैलाई थाहा छ (पोष्ट-कोविडमा जस्तो), उनी इ the्ल्यान्ड राष्ट्रिय टीमको आशा र एक प्रतिस्पर्धी बन्न पुगे हैरी माग्इयर। यद्यपि केवल केहि फ्यानहरूले उनको रोचक जीवन कथा पढेका छन्। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
Conor Coady बचपन कहानी:
जीवनी सुरु गर्नेहरूको लागि, उहाँको उपनाम हो कोनोरिन्हो। कोनोर डेभिड कोएडीको जन्म फेब्रुअरी १ ​​25 1993 the को २th तारिखमा उनको आमा, गेल कोडी र बुबा एन्डी कोडीको इर्जेन्डको मर्सीसाइडको सेन्ट हेलेन्स शहरमा भएको थियो।
Conor Coady बढ्दो वर्ष:
कोनोरिन्हो एक फुटबलर हुन चाहेको हुर्के र अरू केही पनि होइन। खेल हेडोकका सेन्ट हेलेन्सको बरोमा भएका धेरै परिवारहरूमा लोकप्रिय थियो जहाँ उहाँ हुर्कनुभयो। साथै, कोनोर कोड्डीका आमा बुबा र भाई ह्यारिसन आफ्नो बाल्यकालको समयमा लिभरपुलका उत्कट प्रशंसक थिए। तसर्थ, उनको शुरुआती इच्छा एक कल्पना कल्पना थिएन।
Conor Coady परिवार पृष्ठभूमि:
पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, उहाँका बाबुआमाले कर्तव्यको ब्यबस्था गरे कि उहाँलाई उत्तम भन्दा बढि केहि दिनुहुन्न। वास्तवमा, एन्डी र गेलले सुनिश्चित गरे कि कोनोर मानक स्कूलमा गए - जुन उनीहरूको परिवारको मध्यम-वर्गको सामाजिक आर्थिक स्थिति हो।
Conor Coady परिवार मूल:
डिफेन्डर जन्म र पुर्खाहरूको सद्गुणद्वारा एक बडफाइड अंग्रेज हो। अझ, कोडीको जडहरू निर्धारण गर्न गरिएको अनुसन्धानको नतीजाले सेन्ट हेलेन्स आफ्नो वंशको इतिहासमा महत्वपूर्ण चरण लिन्छ भनेर देखाउँदछ। सेन्ट हेलेन्सको बरो विशेष गरी हेडॉक छ जहाँ कोनोर कोडीको परिवारको हो।
कसरी क्यारियर फुटबल शुरू भयो:
जब लिभरपूलमा उसले क्यारियर फुटबलमा यात्रा शुरू गर्यो, तब कनर केवल 8 बर्षको मात्र थियो। चाखलाग्दो कुरा के हो भने उहाँ उही उमेर समूहमा थिए Raheem Sterling, जोन फ्लानागन र आंद्रे विज्डम। यहाँ उसको जवानीको समयमा डिफेन्डरको एक दुर्लभ तस्बिर छ।
रेडहरूको समुहको माध्यमबाट उठ्दै, युवा डिफेन्डरले रेडजस्ता उल्लेखनीय ताराहरूबाट सिक्ने अवसर पाए Gerrard Carragher र रिगाबर्ट गीत। उसले एक पटक एउटा साक्षात्कारमा एक्सप्रेसएन्डस्टारलाई भन्यो कि:
"जेरार्ड र क्याराघरले मेरो क्यारियरमा १००% प्रभाव पारेको थियो। मैले उनीहरूलाई खेल्ने, उनीहरूसँग प्रशिक्षित गर्ने र उनीहरूको पछि लाग्ने सुअवसर पाएँ। ”
Conor Coady जीवनी- प्रख्यात कहानी को मार्ग:
रेड्ससँगको आफ्नो क्यारियरको चरम सीमामा, उदीयमान डिफेन्डरले २०१२ मा अन्झी माखाचकला बिरूद्ध युरोपा लिग खेलको दौडान शुरुवात गर्‍यो। उनले छिट्टै लिग वन क्लब शेफील्ड युनाइटेडसँग loanणको लागि सहमत हुनु अघि २०१ 2012 मा फुलहमको बिरूद्ध प्रिमियर लिगको शुरुआत गरेका थिए। ।
रौ Patricio बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
शेफील्डसँग loanणको योजना पूरा भएपछि, कोडीले आफ्नो परिवारसँग सल्लाह गरेपछि लिभरपूल छोड्ने निर्णय गरे। सत्य यो हो कि, उनलाई थाहा थियो कि रातोको पहिलो टीममा स्थान पाउन गाह्रो हुनेछ, तर त्यसबेलाको प्रतिरक्षा प्रतिभाको पूललाई ​​धन्यवाद छैन - उदाहरणको लागि Dejan Lovern आदि मनपर्दैन Joe Gomez, गरीब डिफेन्डरले छोड्नुभयो कि लिभरपूलको साथ उसको सफलताको अवसरहरू स्लिम थियो।
Conor Coady को जैव- प्रसिद्धि को उदय:
यसैले, २०१udd मा हडर्सफील्डमा to००,००० डलरको ट्रान्सफर शुल्कमा सामेल हुन सजिलो थियो। २०१ 2014 मा वोल्वरहैम्प्टन वान्डरर्समा सर्नु भन्दा धेरै समय पछि त्यसले भेडाहरूलाई प्रिमियर लिगमा २०१–-१– सत्रमा बढुवा देख्यो।
यो जीवनी लेख्ने समयको लागि द्रुत अगाडि, लिभरपूल छोडेदेखि कन्नर कोएडीले एउटा उल्का वृद्धि भएको छ। रक्षक वुल्फको एक स्थापित सदस्य हो। थप रूपमा, उसले भर्खरै इ England्ल्यान्ड राष्ट्रिय स्क्वाडमा आफ्नो पहिलो कल भयो गेरैथ साउथेट उसलाई देशको रक्षाको आशालाई बोक्न लगाउँदछ।
उसको लागि जुनसुकै कुरा पनि बाहिर आए हामी आशावादी छौं कि ऊ ठीक छ। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
Conor Coady W اہ र बच्चाहरू भेट्नुहोस्:
त्यहाँ वोल्भरहेम्प्टनको केहि खेलाडीहरू छन् जसले आफ्नी पत्नी र बच्चाहरूको गर्व गर्न सक्छन्। केन्द्र फिर्ता ती मध्ये एक हो। Conor Coady को पत्नी Amie नाम ले जान्छ। उनी एक ब्लन्डी हुन् जसले डिफेन्डरले आफ्नो जीवनको प्रत्येक विशेष पलहरू खर्च गर्दछन्।
ऊ उनलाई बिदामा बाहिर लैजान्छ र उनी र उनको क्यारियरमा उनको अथक समर्थनको प्रशंसा गाउन कहिल्यै रोकिदैन। यद्यपि त्यहाँ केहि अभिलेखहरू छैनन् जब दम्पतीहरूले डेटि or गर्न वा शपथ पूरा गरे, हामी जान्दछौं कि उनीहरूको मिलनले boys केटाहरूको जन्मलाई जन्म दियो। तिनीहरूमा हेनरी, फ्रेड्डी र लुई छन्।
हेर्नुहोस् Conor Coady उनकी पत्नी र बच्चाहरु संग एक विशेष क्षण साझा।
Conor Coady पारिवारिक जीवन:
जब पछाडि केन्द्र केन्द्रमा उसको नजिकका व्यक्तिको नाम सूचीबद्ध गर्न सोधिन्छ, हामी सजिलैसँग उसले उल्लेख गर्ने पहिलो तीन नामहरू भविष्यवाणी गर्न सक्छौं। तिनीहरू उसको परिवारका सदस्य हुन्। हामी तपाइँलाई Conor Coady को आमा बुबा र भाई बहिनीहरू को बारे मा तथ्यहरु ल्याउन। साथै, तिनका आफन्तहरूका बारे तथ्यहरू यहाँ छलफलको विषय बन्नेछ।
Conor Coady बुबाको बारेमा:
एन्डी डिफेन्डरको बुबाको नाम हो। Coady उनको जीवन र क्यारियर मा एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व को रूप मा सम्मान। ऊ डिफेन्डरलाई जताततै छोडियो जब ऊ बच्चाको रूपमा थियो र कहिल्यै वयस्क सकर स्टारबाट टाढा हुन सकेन। वास्तवमा, एन्डीले आफ्नो छोराको खेल कहिल्यै गुमाउँदैन किनकि ऊ जताततै यात्रा गर्छ उसलाई फुटबल खेल खेल्न र घरबाट टाढा।
Conor Coady आमाको बारेमा:
गेल फुटबलरको आमाको नाम हो। उनी भोल्वरहैम्प्टनको एक उत्कट प्रशंसक हो किनभने उनको छोराले ब्वाँसहरूसँग उनको व्यापारको प्रस्ताव राख्छ। हामी पृष्ठहरू निकास्न सक्छौ कसरी उनले आफ्नो पाला दिनबाट कोडीको पालनपोषण गरे कि उनलाई आज उनी मान्छे बनाउँछन्। जे भए पनि, हामी विश्वास गर्दछौं कि तपाईले बहाव पाउनुभयो र गेलले गरेको कामका लागि धन्यवाद दिन हिचकिचाउँदैन र यदि तपाईका पथहरू पार भए भने।
Conor Coady भाई बहनहरु को बारे मा:
अ man्ग्रेजी मानिससँग एक जना भाइ छन् जुन ह्यारिसनको रूपमा चिनिन्छ। कोडीले उनको बुबाको जस्तो उत्कृष्ट समर्थनको लागि ह्यारिसनलाई क्रेडिट दिए। वास्तवमा भन्ने हो भने, भाइहरूले घनिष्ठ सम्बन्ध गाँसेका र एक अर्काको फिर्ता पाएको हो कि यथोचित शंकाबाट परे।
तपाईं यो शट मा Conor Coady भाई भेट्न सक्नुहुन्छ?
Conor Coady नातेदारहरूको बारेमा:
केन्द्रको फिर्ता निकट परिवारबाट टाढा, उनका पुर्खा बारे रेकर्ड छैन। अर्को शब्दहरुमा, उनको मामा र बुवा हजुरबुबा को रेकर्ड छैन। न त उनका काका, काकी, काकी, भतिजा, भतिजा र भतिजीहरूका बारे कुनै सूचनाको टुक्रा छन्।
Conor Coady व्यक्तिगत जीवन:
केन्द्रको पछाडि को हो उसको बारेमा कुरा गरौं जसले यो सुनिश्चित गर्दछ कि उसको गोलकीपर एकदम काम गर्दैन। उसको चरित्रको सामग्री परिवारका सदस्यहरू र नजिकका सहयोगीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ जसले आफ्नो शान्त र संकलन प्रकृतिमा प्रमाणित गर्दछ।
साथै, Coady एक प्राकृतिक नेता र एक प्रेरणादायक उपस्थिति जहाँ उहाँ जानुहुन्छ। त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन उसलाई फुटबल पछि मनपर्दछ। ती चीजहरूमा भिडियो गेमहरू खेल्न, यात्रा र आफ्नो परिवार र साथीहरूसँग गुणस्तरको समय खर्च गर्नु समावेश छ।
Conor Coady जीवनशैली:
फुटबल स्टारले कसरी आफ्नो पैसा कमाउँछ भन्ने सन्दर्भमा, यो सामान्य ज्ञान हो कि फुटबल एक धेरै आकर्षक खेल हो। वास्तवमा, PSG तारा किलियन एमपीपी एक पटक टिप्पणी गरे कि "खेलमा पागल पैसा" छ। यसैले, यो आश्चर्यजनक होइन कि कोडीले साप्ताहिक £ 55,000 कमाउँछ। अधिक, यस केन्द्र फिर्ता वार्षिक £ २2,864,400,,3.5०० को घर ले तलब उनको estimated million मिलियन को अनुमानित कुल सम्पत्ती को औचित्य।
यस्तो महत्वपूर्ण सम्पत्ती आधारको साथ, यो एक विदेशी अडीमा Coady समुद्री यात्रा देख्नु सामान्य छ। यति मात्र, उनीसँग वोल्भरहेम्प्टनमा कप्तान फिटिंग हाउस छ, सबैलाई पागल पैसा र समर्थन जुन शीर्ष उडान फुटबलको साथ आउँदछ।
हामीले तपाईंलाई भनेको थियौं कि उसको अडी छ, हैन र?
Conor Coady बारे तथ्यहरू:
डिफेन्डरको यो रोचक जीवनी समेट्नको लागि, यहाँ उहाँ बारे कम वा अज्ञात तथ्यहरू छन्।
प्रति महिना £ 238,700
प्रति हप्ता £ 55,000
प्रति दिन £ 7,857
प्रति घण्टा £ 327
प्रति मिनेट £ 5.45
यो के Coady छ तपाईंले उसको बायो हेर्न शुरू गर्नुभएको हुनाले कमाएको छ।
तथ्य #2- फिफा २०२० रेटिंग्स:
ब्रिटिश फुटबलरसँग 79 British को सम्भावितताको साथ rating of को समग्र मूल्या is्कन छ। सत्य यो हो कि कसैलाई अंग्रेजी रक्षाको आशा मानिन्छ। वास्तबमा, Conor Coady को प्रीमियर लीग प्रोफाइल उसको गुणको मात्रा बोल्छ। आशा छ, फिफाले तथ्या rev्कलाई पुन: अवलोकन गर्नेछ र उनीहरूलाई वास्तविकता प्रतिबिम्बित गर्दछ।
तथ्य #3- Conor Coady को धर्म:
भेल्भ्स कप्तान एक विश्वासी र इसाई हुन्, यद्यपि हामीसँग कुनै सुझाव वा प्रमाण छैन। ओह एक मिनेट पर्खनुहोस्, उनको भाई ह्यारिसनको नाममा जान्छ। अझ, कोनोर कोड्डीका आमा बुबाले उनलाई बीचमा नाम डेविड राखेका थिए - एउटा क्रिश्चियन नाम। यो एक संकेतको लागि पर्याप्त छ।
Conor Coady को जीवनी मा यो आकर्षक लेख्न को लागी पढ्न को लागी धन्यवाद। हामी आशावादी छौं कि यसले तपाईंलाई प्रेरणा पायो कि पारिवारिक समर्थनले व्यक्तिहरूको प्रगतिमा मद्दत पुर्‍याउन धेरै लामो दूरी तय गर्छ।
कोडीको परिवारको उदाहरण लिनुहोस् जसले उहाँलाई पछ्याउँथे जहाँ पनि उहाँ जानुहुन्छ। तिनीहरू रेडहरू थिए जब केन्द्र फिर्ता लिभरपुलसँग थियो र वोल्भ बन्यो जब ऊ वोल्भरहेम्प्टनमा सामेल भयो।
थप रूपमा, कर्नर कोडीका अभिभावकहरूको रुचि प्रवर्धनमा उनीहरूको स्थिरताको लागि हामी उनीहरूको प्रशंसा गर्छौं। वास्तवमा, उनीहरूको समर्थन प्रायः घरहरूमा फेला पर्दैन।
पुरा नाम Conor डेविड Coady
जन्म मिति फेब्रुअरी १ ​​th day day १ 25
जन्मस्थान सेर हेलेन्स मर्सीसाइड, इ England्ल्याण्डमा।
प्ले गर्दै डिन्डर / केन्द्र फिर्ता
आमाबाबुले गेल र उनका बुबा एन्डीलाई।
भाई बहिनीहरू हैरिसन
बच्चाहरु हेनरी, फ्रेड्डी र लुई
नेट मूल्य पाउन्ड 3.5 मिलियन
सोख भिडियो खेलहरू खेल्दै, यात्रा र उसको परिवार र साथीहरूसँग क्वालिटी समय खर्च गर्दै।
उचाइ Fe फीट, १ ईन्च
Lifebogger मा, हामी सटीकता र निष्पक्षता संग बचपन कथाहरू र जीवनी वितरण मा गर्व गर्छौं। यदि तपाइँ केनोर कोएडीको बायोमा सही देखिने कुनै कुरा देख्नुहुन्न भने कृपया हामीलाई सचेत गराउनुहोस्। अन्यथा, एक टिप्पणी राख्नुहोस् हामीलाई बताउनुहोस् कि तपाईं डिफेन्डरको बारेमा के सोच्नुहुन्छ।